BUILT-IN SOUND CARD ကို, BIOS ထဲမှာ DISABLE လုပ်နည်း - BIOS ကို - 2019
Built-in, BIOS ထဲမှာသံကိုကဒ်ကို disable
KERNELBASE.dll - ဒီ NT ဖိုင်စနစ်, Boot တက်သည် TCP / IP ကိုယာဉ်မောင်းနှင့် web server ကိုထောက်ပံ့တာဝန်ရှိသည်သောက Windows စနစ်က component တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာကြည့်တိုက်ပျောက်နေသို့မဟုတ်ပြုပြင်လိုက်ပါလျှင်အမှားတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကအဆက်မပြတ်စနစ်အသုံးပြုသောကြောင့်ထိုသို့ဖယ်ရှားပစ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့်, အများဆုံးကိစ္စများတွင်, တကရလဒ်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်မှားယွင်းမှုတစ်ခုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ဖြေရှင်းရန် Options ကို
KERNELBASE.dll တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကက operating system ကိုသူ့ဟာသူပြန်လည်အားဖြင့်ပွနျလညျထူထောငျခွငျးသို့မဟုတျအရန်အစီအစဉ်များကို အသုံးပြု. ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကြိုးစားနိုင်ပါသည်။ စာကြည့်တိုက်များ၏မိတ္တူတစ်ဗားရှင်းစံကို Windows features တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်တိုင်လည်းရှိပါသည်။ ဤအလုပ်ရပ်များရေတွက်စဉ်းစားပါ။
Method ကို 1: DLL ကို Suite
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုသီးခြားစာကြည့်တိုက်များ install လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ပေးသောအပိုဆောင်း tools တွေကိုအစုတခုဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာအပြင်, တက PC အတွက်စာကြည့်တိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးအခြားသူတို့ကိုလွှဲပြောင်းရန်ခွင့်ပြု, တစ်ဦးသတ်မှတ်ထားသော directory ကိုမှ Boot တက် option ကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။
DLL ကို Suite အခမဲ့ Download
အပိုင်းကိုသွားပါ "ဒေါင်းလုပ် DLL ကို".
တော်အောင်ပြုပြင် KERNELBASE.dll ရှာဖွေရေးလယ်ပြင်၌။
သူမ၏အမည်ပေါ်တွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦး DLL ကိုရွေးချယ်ခြင်း။
Serps ထံမှစာကြည့်တိုက် Path ကို installation ကို select လုပ်ပါ
စာနယ်ဇင်းများ "Upload လုပ်ပါ".
ဒေါင်းလုဒ်နှင့်ကလစ်ဘို့လမ်းကြောင်းကို Specify "အိုကေ".
ကအောင်မြင်စွာတင်လျှင်အဆိုပါ utility ကိုအစိမ်းရောင်အမှန်ခြစ်အမှတ်အသားဖိုင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 2: DLL-Files.com လိုင်း
ဤသည်ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်များအတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် site ၏တစ်ဦးဒေတာဘေ့စအသုံးပြုတဲ့ client ကို application ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာစာကြည့်တိုက်၏အတော်လေးတွေအများကြီးရှိပြီးပင်ကနေရှေးခယျြဖို့ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းပူဇော်ကြ၏။
DLL-Files.com လိုင်း Download
KERNELBASE.dll install ပြုလုပ်သုံးစွဲဖို့, သင်အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပါရန်လိုအပ်ပါတယ်:
ဝင်ရောက် KERNELBASE.dll ရှာဖွေရေးဂရပ်၌တည်၏။
စာနယ်ဇင်းများ "ရှာရန်" ။
၎င်း၏အမည်ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် file ကိုရွေးချယ်ပါ။
Done, KERNELBASE.dll စနစ်သို့တင်လိုက်တယ်။
သငျသညျပြီးသားတစ်ဦးစာကြည့်တိုက်ရှိလျက်နှင့်အမှားနေဆဲထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည် အကယ်. သင်သည်အခြားဖိုင်ရှေးခယျြနိုငျရှိရာအထူး mode ကိုလည်းမရှိ။ ဒါဟာမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်:
အရန်မြင်ကွင်းကို Enable လုပ်ထားပါ။
အခြား KERNELBASE.dll နှင့်စာနယ်ဇင်းကို Select လုပ်ပါ "၏ဗားရှင်းကို Select လုပ်ပါ".
တပ်ဆင်လိပ်စာ Specify KERNELBASE.dll.
အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်သတ်မှတ်ထားသောတည်နေရာဖိုင်ကို load ပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 3: ပူးတွဲ KERNELBASE.dll
အဲဒီ DLL ကို install လုပ်မဆိုလျှောက်လွှာ၏အကူအညီမပါဘဲ, သငျသညျကို download လုပ်ပါနှင့်လမ်းမပေါ်တွင်ထားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်:
ထို့နောက် operating system ကိုအလိုအလျောက်ဗားရှင်းသစ်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်, နောက်ထပ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမပါဘဲအသုံးပြုရန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဖြစ်ပျက်မပါဘူးဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, အထူး command ကို အသုံးပြု. မှတ်ပုံတင်ရန်အခြားစာကြည့်တိုက်သို့မဟုတ် DLL ကို install လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာသော်လည်းအားလုံးသည်အထက်ပါနည်းလမ်းများရိုးရိုး, ထိုစနစ်ဖိုင်ကိုကူးယူထားပါသည်။ System ကိုဖိုင်တွဲလိပ်စာ OS ဗားရှင်းပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။ ဒါဟာသင်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတွင်စာကြည့်တိုက်ကိုကော်ပီကူးဖို့လိုပါတယ်ဘယ်မှာထွက်ရှာတွေ့ခြင်းငှါ, installation ကို DLL အကြောင်းကိုဆောင်းပါးဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုသည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောကိစ္စများတွင်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ပတ်သက်. DLL ကိုမှတ်ပုံတင်သတင်းအချက်အလက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားဆောင်းပါးထဲမှာတွေ့နိုင်ပါသည်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။